အမြိုးသားမြား စိတျသှားတိုငျးကိုယျမပါ ဖွဈနပွေီလား
အမြိုးသားတဈယောကျအဖို့ … မိမိအဖျောနဲ့ လိငျဆကျဆံနစေဉျမှာ… ဆန်ဒမပွီးမွောကျခငျထိ လိငျအင်ျဂါ ထောငျမတျနဖေို့ရာ လိုအပျပါတယျ…ဒီလိုမဟုတျပဲ လမျးခုလတျမှာ ပနျးညိုးသှားတာ.. လိငျစိတျနှိုးကွှနပေမေယျ့ ..မထောငျမတျနိုငျခွငျးကို Erectile dysfunction လို့ ချေါပါတယျ…ဒီလိုဖွဈခွငျးဟာ ခတ်ေတခဏ ဖွဈနိုငျသလို ရောဂါအရငျးမွဈတဈခုကွောငျ့လဲ ဖွဈတတျပါတယျ..
ဒီလို ခံစားနရေတဲ့ အမြိုးသားတှမှော “လိငျအင်ျဂါမထောငျမတျနိုငျဖို့ ခကျခဲခွငျး၊ ဆန်ဒပွီးမွောကျသညျထိ ထိနျးမထားနိုငျခွငျး၊ လိငျမှုကိစ်စအပျေါ စိတျဝငျစားမှု နညျးခွငျး ” စတဲ့ လက်ခဏာတှေ တှရေ့တတျပါတယျ… ဒွါ့ပငျ သုတျလှတျဖို့ရာ ကွာညောငျးခွငျး၊ လိငျစိတျနိုးကွှဖို့ရာ မြိုးစုံပွုလုပျသျောငွား ဆန်ဒမပွီးမွောကျနိုငျခွငျးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ… ဒီလို ကွုံတှရေ့တာ လအတနျကွာလာပါက ဆရာဝနျနှငျ့ ဆှေးနှေးကုသသငျ့ပါတယျ.. သို့မှသာ မိမိ၏ ရောဂါ ဇဈမွဈကို အမွနျရှာဖှနေိုငျပွီး ထိရောကျတဲ့ ကုသမှုကို ပေးနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ…
သှေးတိုး၊ နှလုံး ၊ ဆီးခြို ရှိတဲ့ လူနာမြား၊ အဝလှနျသူမြား မှာ ဒီလိုကိစ်စရပျတှေ ပိုကွုံရတတျပါတယျ… ဆေးလိပျ ၊ အရကျ၊ မူးယဈဆေးဝါး သုံးစှဲခွငျးတှကွေောငျ့လဲ ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ.. ခှဲစိတျကုသမှုပွီးနောကျပိုငျးမှာ (သို့) ထိခိုကျမှု တဈခုကွောငျ့လဲ ကွုံရတတျပါတယျ ဒွါ့ပငျ အသကျရှယျကွီးမွငျ့လာတဲ့ နောကျပိုငျးမှာလဲ ဒါမြိုး ကွုံရတတျပါတယျ..သို့သျော လူလတျပိုငျးတှမှောလဲ ဖွဈလရှေိ့တတျတာမို့
တခါတရံမှာ မိသားစုနဲ့ဆိုငျတဲ့ ပွသနာမြား၊ စီးပှားရေး လူမှုရေး အစရှိတာတှကွေောငျ့ စိတျပငျပနျးခွငျး၊ စိတျလှုပျရှားခွငျး၊ စိတျဓာတျကခြွငျး အစရှိတဲ့ စိတျကနျြးမာရေးကွောငျ့ လိငျအင်ျဂါမထောငျမတျနိုငျခွငျး ဖွဈတတျပါတယျ.. တခွားနိုငျငံတှမှောတော့ ဒီလိုစိတျကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ပွသနာကို ကုသဖို့ရာ… “မိမိ ခံစားခကျြ၊ စိတျအခွအေနကေို ဖှငျ့ပွော၊ပွနျဆှေးနှေးခွငျး စသညျ့ ကုထုံး” ဖွငျ့ စိတျကနျြးမာရေးဆရာဝနျတှနေဲ့ ကုသပမေယျ့.. မွနျမာနိုငျငံက အရှကျအကွောကျကွီးတာကွောငျ့ ဒီလို ကိစ်စကို တပါးသူကိုပွောပွဖို့ရာ ရှကျတတျကွပါတယျ..သို့သျော မိမိမှာ ဒီလို ဖွဈလာပါက နီးစပျရာ ဆရာဝနျဆီမှာတော့ ဖှငျ့ပွောတိုငျပငျသငျ့ပါတယျ.. ဒါမှ အမွနျပြောကျကငျးနိုငျမှာပါ…
Erectile dysfunction ကို ဆေးဝါးဖွငျ့ ကုသခွငျး၊ စိတျကနျြးမာရေးဆှေးနှေးကုထုံး ၊ ယောဂ ၊ လကေ့ငျြ့ခနျး အစရှိသညျတို့ဖွငျ့ ကုသလို့ရပါတယျ… တခါတရံမှာ တိုငျးရငျးဆေး၊သဈပငျပနျးမံမြားဖွငျ့ ကုသလရှေိ့ကွရာ ဒီလို မကုသခငျ ဆရာဝနျနှငျ့ အရငျဆှေးနှေးတိုငျပငျသငျ့ပါတယျ…ကုသနညျးမြားဟာ မြိုးစုံပျေါထှကျနပွေီးမို့ မိမိအတှကျ သငျ့လြျောမညျ့ ကုသနညျးကို ဆရာဝနျက ရှေးခယျြကုသပေးမှာ ဖွဈပါတယျ….
မိမိမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ကနျြးမာရေး ရှိနပေါက ဒီလို ပွသနာ ဖွဈဖို့ အခှငျ့လမျးနညျးပါတယျ… ဒါကွောငျ့
သငျတငျ့မြှတပွီး အားရှိသော အစားအသောကျမြားစားခွငျး
မိမိစိတျကို အပနျးဖွခွေငျး အစရှိတဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှုလေးတှေ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ…
ကနျြးမာ သနျစှမျးပွီး စိတျသှားရာ ကိုယျပါနိုငျသော အမြိုးသားမြား ဖွဈကွပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ…..
အမျိုးသားများ စိတ်​သွားတိုင်းကိုယ်​မပါ ဖြစ်​​နေပြီလား
အမျိုးသားတစ်​​ယောက်​အဖို့ … မိမိအ​ဖော်​နဲ့ လိင်​ဆက်​ဆံ​နေစဉ်​မှာ… ဆန္ဒမပြီး​မြောက်​ခင်​ထိ လိင်​အင်္ဂါ ​ထောင်​မတ်​​နေဖို့ရာ လိုအပ်​ပါတယ်​…ဒီလိုမဟုတ်​ပဲ လမ်းခုလတ်​မှာ ပန်းညိုးသွားတာ.. လိင်​စိတ်​နှိုးကြွ​နေ​ပေမယ့်​ ..မ​ထောင်​မတ်​နိုင်ခြင်းကို Erectile dysfunction လို့ ​ခေါ်ပါတယ်​…ဒီလိုဖြစ်​ခြင်းဟာ ​ခေတ္တခဏ ဖြစ်​နိုင်​သလို ​ရောဂါအရင်းမြစ်​တစ်​ခု​ကြောင့်​လဲ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​..
ဒီလို ခံစား​နေရတဲ့ အမျိုးသား​တွေမှာ “လိင်​အင်္ဂါမ​ထောင်​မတ်​နိုင်​ဖို့ ခက်​ခဲခြင်း၊ ဆန္ဒပြီး​မြောက်​သည်​ထိ ထိန်းမထားနိုင်​ခြင်း၊ လိင်​မှုကိစ္စအ​ပေါ် စိတ်​ဝင်​စားမှု နည်းခြင်း ” စတဲ့ လ​က္ခဏာ​တွေ ​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​… ဒြါ့ပင်​ သုတ်​လွှတ်​ဖို့ရာ ကြာ​ညောင်းခြင်း၊ လိင်​စိတ်​နိုးကြွဖို့ရာ မျိုးစုံပြုလုပ်​​သော်​ငြား ဆန္ဒမပြီး​မြောက်​နိုင်​ခြင်း​တွေ ကြုံရတတ်​ပါတယ်​… ဒီလို ကြုံ​တွေ့ရတာ လအတန်​ကြာလာပါက ဆရာဝန်​နှင့်​ ​​ဆွေး​​နွေးကုသသင့်​ပါတယ်​.. သို့မှသာ မိမိ၏ ​ရောဂါ ဇစ်​မြစ်​ကို အမြန်​ရှာ​ဖွေနိုင်​ပြီး ထိ​ရောက်​တဲ့ ကုသမှုကို ​ပေးနိုင်​မှာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​…
​သွေးတိုး၊ နှလုံး ၊ ဆီးချို ရှိတဲ့ လူနာများ၊ အဝလွန်​​သူများ မှာ ဒီလိုကိစ္စရပ်​​တွေ ပိုကြုံရတတ်​ပါတယ်​… ​ဆေးလိပ်​ ၊ အရက်​၊ မူးယစ်​​ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း​တွေ​ကြောင့်​လဲ ဖြစ်​ပွားနိုင်​ပါတယ်​.. ခွဲစိတ်​ကုသမှုပြီး​နောက်​ပိုင်းမှာ (သို့) ထိခိုက်​မှု တစ်​ခု​ကြောင့်​လဲ ကြုံရတတ်​ပါတယ်​ ဒြါ့ပင်​ အသက်​ရွယ်​ကြီးမြင့်​လာတဲ့ ​နောက်​ပိုင်းမှာလဲ ဒါမျိုး ကြုံရတတ်​ပါတယ်​..သို့​သော်​ လူလတ်​ပိုင်း​တွေမှာလဲ ဖြစ်​​​လေ့ရှိတတ်​တာမို့
တခါတရံမှာ မိသားစုနဲ့ဆိုင်​တဲ့ ပြသနာများ၊ စီးပွား​ရေး လူမှု​ရေး အစရှိတာ​တွေ​ကြောင့်​ စိတ်​ပင်​ပန်းခြင်း၊ စိတ်​လှုပ်​ရှားခြင်း၊ စိတ်​ဓာတ်​ကျခြင်း အစရှိတဲ့ စိတ်​ကျန်းမာ​ရေး​ကြောင့်​ လိင်​အင်္ဂါမ​ထောင်​မတ်​နိုင်​ခြင်း ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​.. ​တခြားနိုင်​ငံ​တွေမှာ​တော့ ဒီလိုစိတ်​​​ကြောင့်​ဖြစ်​တဲ့ ပြသနာကို ကုသဖို့ရာ… “မိမိ ခံစားချက်​၊ စိတ်​အ​ခြေအ​နေကို ဖွင့်​​ပြော၊ပြန်​​ဆွေး​နွေးခြင်း စသည့်​ ကုထုံး​” ဖြင့်​ စိတ်​ကျန်းမာ​ရေးဆရာဝန်​​တွေနဲ့ ကုသ​ပေမယ့်​.. မြန်​မာနိုင်​ငံက အရှက်​​အ​ကြောက်​ကြီးတာ​ကြောင့်​ ဒီလို ကိစ္စကို တပါးသူကို​ပြောပြဖို့ရာ ရှက်​တတ်​ကြပါတယ်​..သို့​သော်​ မိမိမှာ ဒီလို ဖြစ်​လာပါက နီးစပ်​ရာ ဆရာဝန်​ဆီမှာ​တော့ ဖွင့်​​ပြောတိုင်​ပင်​သင့်​ပါတယ်​.. ဒါမှ အမြန်​​ပျောက်​ကင်းနိုင်​မှာပါ…
​Erectile dysfunction ကို ​ဆေးဝါးဖြင့်​ ကုသခြင်း၊ စိတ်​ကျန်းမာ​ရေး​ဆွေး​နွေးကုထုံး ၊ ​ယောဂ ၊ ​လေ့ကျင့်​ခန်း အစရှိသည်​တို့ဖြင့်​ ကုသလို့ရပါတယ်​… တခါတရံမှာ တိုင်းရင်း​ဆေး၊သစ်​ပင်​ပန်းမံများဖြင့်​ ကုသ​လေ့ရှိကြရာ ဒီလို မကုသခင်​ ဆရာဝန်​နှင့်​ ​အရင်​ဆွေး​နွေးတိုင်​ပင်​သင့်​ပါတယ်​…ကုသနည်းများဟာ မျိုးစုံ​ပေါ်ထွက်​​နေပြီးမို့ မိမိအတွက်​ သင့်​​လျော်​မည့်​ ကုသနည်းကို ဆရာဝန်​က ​ရွေးချယ်​ကုသ​ပေးမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​….
မိမိမှာ ​ကောင်းမွန်​တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​နဲ့ ကျန်းမာ​ရေး ရှိ​နေပါက ဒီလို ပြသနာ ဖြစ်​ဖို့ အခွင့်​လမ်းနည်းပါတယ်​… ဒါ​ကြောင့်​
သင်​တင့်​မျှတပြီး အားရှိ​သော အစားအ​သောက်များစားခြင်း
မိမိစိတ်​ကို အပန်း​ဖြေခြင်း အစရှိတဲ့ ​နေ့စဉ်​လှုပ်​ရှားမှု​လေး​တွေ ပြုလုပ်​သင့်​ပါတယ်​…
ကျန်းမာ သန်​စွမ်းပြီး စိတ်​သွားရာ ကိုယ်​ပါနိုင်​​သော အမျိုးသားများ ဖြစ်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​…..